Cabdi Xaashi oo ka qeybgalaya shir ka furmay Qatar [Sawirro]
DOHA, Qatar - Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ka qeybgalaya shirka 7aad ee Ururka Baarlamaannada Adduunka ee la dagaalanka Musuq maasuqa, kaasoo ka furmay maanta Qatar.
Kulanka oo ka socda Doha, waxaa isla shir-Guddoominaya Gudoomiyaha Golaha Shuurada Qatar, Gudoomiyaha Ururka Baarlamaannada Adduunka(IPU) iyo Gudoomiyaha Ururka Baarlamaannada Adduunka ee la dagaalanka Musuqa (GOPAC).
Wafdiga Soomaaliya ayaa shalay gelinkii dambe ka baxay magaaladda Muqdisho, iyadoo xalay lagu soo dhaweeyay Doha oo uga qeybgalayo Shirka caalamiga oo mudo labo maalmood ah socon doona.
Xubo katirsan labada golle ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku wehlinaya Cabdi Xaashi ka qeybgalka Shirka Ururka Baarlamaannada Adduunka, sida lagu sheegay war qoraal ah oo kasoo baxay Aqalka Sare.
Dowladda Qatar ayaa xiriir dhaw la leh maamulka Madaxweyne Farmaajo, iyadoo dhawaan Muqdisho ka daah-furtay mashaariic dhowr ah oo kamid ah dhismaha jidadka isku xira caasimadda iyo degmooyinka Jowhar iyo Afgooye.
Qatar ayaa saaran mudo 2 sano ah go'doomin dhulka, badda iyo cirka ah, oo ay kusoo rogeen Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxreyn, kadib markii ay xiriirka u jareen June 2017, iyagoo ku eedeeyay xukuumadda Doha inay argagaxisadda maal-geliso.
Kulankii Aqalka sare ku ansixin lahaa sharci muhiim ah oo baaqday
Soomaliya 04.12.2018. 18:11
Sharcigaan oo uu horey usoo meel-mariyay Aqalka Hoose ayaa waxaa soo diyaarisay...
Xaashi oo shaaciyey xudunta khilaafka kala dhaxeeya Golaha Shacabka
Soomaliya 03.09.2020. 14:00
CC Shakuur oo difaacay Sanbaloolshe: "Xaashi wuxuu noqday denbi qariye"
Soomaliya 17.01.2020. 17:16
Cabdi Xaashi oo laga raali geliyay Qalad ay AMISOM ka gashay
Soomaliya 03.07.2018. 10:29
Soomaaliya: Aqalka Sare oo Go’aanno kasoo saaray Mooshinka Jawaari [Daawo]
Soomaliya 21.03.2018. 13:44